Ndezvipi zvinokosha uye zvigadzirwa zvematombo anokosha? Inodhura kana kuti inodhura?
Chinhu chinokosha uye chine matombo anokosha
Maererano nesayenzi yezvidzidzo, kune zvikamu zviviri zvezvikamu zvematombo: matombo anokosha uye matombo anokosha.
Kune chete 4 matombo anokosha
Matombo anokosha e4 madhaimani, ruby, sapafire, uye emerald.
Nezvemhuri ye70 uye 500 zvakasiyana-siyana zvinorongwa sematombo
Izvo zvakasiyana betwin zvigadzirwa nemamwe matombo ndeyekuti ivo vanoshandiswa kuita zvishongo kana mamwe matombo haasi.
Kusiyana nezvinotendwa nevanhu vazhinji, chikonzero chimwe bedzi chinoita kuti mabwe aenzaniswe seanokosha ndezvekare. Zvechokwadi, anenge makore 500 apfuura, simba reyika ino raifarira chete mumatombo mana aya. Panguva iyoyo, mamwe mabwe akanga asina kukosha. Naizvozvo tinogona kufunga kuti yaiva mawe evefashoni, panguva iyoyo uye vakagara, kusvikira nhasi, mabwe anokosha kupfuura ose ane simba.
Iyo yaimirira chiratidzo chepfuma nesimba. Uye ndezvikonzero zvechikonzero chimwechete izvo zvichiripo, panguva ino, mabwe anokosha zvikuru.
Saka hakuna tsanangudzo yesayenzi. Inongova nekuda kwemutemo wemusika, kana mutemo wekugovera uye kuda.
Iwe uchanzwa nezve "anokosha" opals, tanzanites, alexandrites uye mamwe akawanda matombo. Izvi zvakaipa chose. Asi inzvimbo yekutengesa inoshandiswa nevatengesi vematombo kukwezva vatengi, uye kuwedzera kukosha kudombo, vachitarisira kuwana mutengo uri nani wekutengesa.
Vazhinji vevatengesi vematombo havasi magemologist uye vanowanzo funga kuti vanoziva zvavari kutaura nezvazvo, kana ivo vachiziva chete yavo yekutenga mutengo uye mutengo wekutengesa wavanotarisira kuwana. Vazhinji vavo havazivi mutsauko uripo pakati pebwe rechisikigo nedombo rekugadzira. Zvinoshamisa, handizvo here?
Ndosaka paine gemological marabhoritari ayo anozivisa matombo. Izvi zvinowedzera mutengo wemutengesi, asi zvinobatsira kutengesa.
Chinokosha uye sematombo anokosha anokosha
Imwe pfungwa isina kururama ndeyekuti mavara emabwe anokosha anokosha chaizvo. Mune chokwadi, izvi hazvirevi nguva dzose. Zvechokwadi, daimondi, ruby, safire kana emerald inogona kuva yakakwana zvikuru mari. Izvo zvinoenderana nehuhu hwavo. Kunyange zvazvo humwe hukuru hwepamusoro huri nematombo anokosha hunogona kudhura zvinopfuura izvi zviduku zvakagadzirwa nemhando.
Muchidimbu, matombo anokosha uye mashoma anokosha anogona kunodhura zvikuru kana asingakwanisi.
Kana iwe uchida nenyaya iyi, unoda kuenda kubva munyanzvi yekuita, tinopa gemology courses.